OEM Anti Acne Wajiga Nadiifi Cosmetics-ka OEM & ODM
OEM Anti Acne Wajiga Nadiifi
[Waxyaabaha ku jira Net] 100 ml
1 Baako / Sanduuq
Kaliumokasiyamka Cocoyl Glycinate, Cocamidopropyl Betaine,
Aloe Barbadensis Casiirka Caleenta, Lavandula Angustifolia (Lavender) Saliid
[Saamaynta ugu weyn]
Anti-finka, qoyaanka, antioxidant
Lavandula Angustifolia (Lavender) Saliid: Waxay leedahay astaamo antioxidant ah, waxay kor u qaadeysaa sameynta borotiinada baqshada, borotiinada isku dhafan ee isku dhafan, iwm, waxayna hagaajineysaa shaqada caqabadda maqaarka.
Aloe Barbadensis Casiirka Caleemaha: Waxay ka caawisaa yareynta niyadda maqaarka iyo kordhinta jilicsanaanta maqaarka; waxay leedahay dib-u-cusbooneysiinta maqaarka wanaagsan iyo saameynta dayactirka ka dib qorraxda, waxayna leedahay saameyn bakteeriyada, anti-bararka iyo qoyaan.
Waxqabadka amino acid ee fudfudud: Kalibaatyam glycine cocoate waa shey anionic ah oo isku daraya asiidh dufan saliid qumbaha (waa qayb muhiim ah oo ka mid ah kolajka maqaarka dadka) iyo glycine. Waxay leedahay xumbo siman oo laastik ah oo hodan ah oo xasilloon. Ka dib marka la maydho, maqaarku ma aha mid cidhiidhi ah, jilicsan, jilicsan, oo leh xidhiidh fiican maqaarka.
Wejigaaga qoy oo nadiifi gacmahaaga. Si tartiib ah ugu duug wajigaaga dhaqaaq wareeg ah. Si fiican u biyo raaci wejigaaga. Haddii aad dareentid qalalan ama bararsan, yaree inta jeer ee isticmaalka.